Kulanka 30-aad ee Golaha Shacabka oo wali qabsoomi la’ – Kalfadhi
Markii 3-aad ayuu maanta dib u dhacay Kulanka 30-aad ee Golaha Shacabka. Goluhu waxay kulmaan 3 maalin todobaadkiiba (Sabti, Isniin iyo Arbaca), hase ahaatee todobaadkii hore waxay kulmeen Sabtidii oo kaliya. Waxaa baaqday kulamadiisii Isniinta iyo Arbacada. Sida ay Xildhibaano ka tirsan Golaha u sheegeen Kalfadhi, maantana ma jiro kulan uu yeelan doono Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Arrintan maaha rabitaan iyo go’aan ka yimaaday Golaha Shacabka, sida ay horay ugu sheegeen Kalfadhi Xildhibaano Golaha ka tirsan. Sababta baaqashada kulamada Golaha waxaa barbar socda qilaaf u dhaxeeya Xildhibaanada iyo Kuxigeenada Guddoonka Golaha Shacabka, kaas oo ka bilowday War-bixin Maaliyadeed uu Guddiga Miisaaniyadda iyo Maaliyadda Golaha dhex keenay, loogana dooday, taas oo kadibteed Guddoomiye Kuxigeenka 1-aad ee Golaha Cabdiwali Muudey uu kala diray Guddigaas.
Xildhibaano u badan kuwa ku jira Guddiga Maaliyadda, oo markii hore ka careysnaa Guddoomiye Kuxigeenka 2-aad ee Golaha, Mahad Cabdalla Cawad, oo laalay war-bixintii ay soo diyaariyeen ee ay Golaha dhex keeneen si ay uga doodaan, ayaa cirka isku sii shareeray markii ay taas ugu xigtay in la kala diray. War-bixintooda, oo ka hadleysay musuq-maasuq maaliyadeed oo dhacay ($40 milyan lacag ka badan ayey sheegeen in la la’yahay), taas oo lagu fooraariyey Wasaaradda Maaliyadda, ayey Xildhibaanada Guddiga Maaliyaddu ku doodayaan in lagu qoonsaday.
Eelka ugu weyn ee Guddigaas qabsaday waxa uu uga yimid markii ay qaarkood mucaaradeen war-bixinta, oo ay sheegeen ineysan waxba kala socon, taginna meeshii ay Guddigu ku ansixiyeen. Taas waxaa “inkirmaad” ku tilmaamay Xildhibaanada ku qanacsan xogta ku jirta war-bixinta. Waxay aaminsan yihiin iney Xukumaddu ka dambeyso kala qeybsanaanta ku dhacday. Sikastaba, waxay taasi qeyb ka ahayd qodobada uu Guddoomiye Muudey u cuksaday kala eryidda Guddiga Maaliyadda.
Guddiga Maaliyaddu waxay qabaan iney go’aanka lagu kala diray u gaar tahay Kuxigeenada Guddoonka Golaha, waxaana aragtidaas xoojiyey markii uu Guddoomiyaha Golaha Shacabka, Maxamed Mursal, ka meer-meeray inuu caddeeyo inuu wax ka ogaa kala dirista Guddiga Maaliyadda, maadaama uu Guddoomiye Muudey ku xusay warqadda uu Guddiga ku kala diray inuu Guddoomiyaha Golaha Shacabku wax ka ogaa.
Qalalaasahaas taagan darteed ayaa la rumeysan yahay inuu maanacayo iney dhacaan kulamadii Golaha. Iyadoon la qaboojin ama aan dhinac loo ridin saxsanaanta Sharciyadda Jiritaanka Guddiga Maaliyadda iyo War-bixintooda Miisaaniyadda ee ku eedeeneysay Xukumadda iney si qaldan u isticmaashay Miisaaniyadda 2018-ka, waxaa adkaan karta in kulan Gole oo la isugu yimaado uu xasilooni ku furmo ama ku dhamaado, sida ay Kalfadhi la wadaageen Xildhibaano ku jira Golaha Shacabka.